The Land Before Time VI: The Secret of Saurus Rock (1988) | MM Movie Store
ပရိတျသတျတှအေတှကျ ဒီတဈခါ တငျဆကျပေးခငျြတာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှဈက စတငျထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ The LandBefore Time ဆိုတဲ့ ကာတှနျးဇာတျလမျးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးအကွောငျးမပွောခငျ သိစခေငျြတာလေးတဈခုရှိပါတယျ။
ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတျလမျးကို ဖနျတီးသူတှအေကွောငျးပါ …. Producer တှကေတော့ ဂြေျာ့ဂျြလူးကပျဈ နဲ့ စတီဗငျစပီးဘာ့ဂျ တို့ဖွဈကွပွီး ဒါရိုကျတာကတော့ ဒှနျဘလုသျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့လို ရုပျရှငျအကြျောအမျောကွီး ၃ ယောကျဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမြိုးဟာMovie Industry မှာ ဒီတဈခုတညျးသာ ရှိတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ဇာတျလမျးလေးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ ကမ်ဘာဦးအစက ဒိုငျနိုဆောလေးတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှငျသနျရပျတညျမှု ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲမှုတှအေကွောငျးကို ဇာတျအိမျတညျပွီး လဈတဲဖု စပိုကျချ ဆယျရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုငျနိုဆောသူငယျခငျြးလေးတဈစုရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ရိုကျပွထားတာပါ။
ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The LandBefore Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူတွေအကြောင်းပါ …. Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂ်ျလူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာMovie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး လစ်တဲဖု စပိုက်ခ် ဆယ်ရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆောသူငယ်ချင်းလေးတစ်စုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။